février 2015 – filazantsaramada
« …Fa izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan’ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin’ny Fanahy Masina. » Jaona 1:33 Toa zavatra sarotra amintsika matetika ny amin’ny resaka batisa, izay sakramenta iray ao amin’ny Fiangonana Kristiana. – Ny sakramenta dia ‘’ahitana » ny fiombonan’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny zavatra […]
Publié parfilazantsaramada février 27, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur BATISA AMIN’NY RANO, BATISA AMIN’NY FANAHY MASINA.
Mitohy hatrany ny fivelaran’ny fiaraha-miasa eo amin’ny sahan’ny FJKM Misaotra an’Andriamanitra fa dia tontosa soa aman-tsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana nanatontosa tamin’ireo Fitandremana efatra avy amin’ny Synodam-Paritany Andrefana (SPAA 10) sy ny Synodam-Paritany Atsimo (SPAA 11) ny 05,06 Febroary. Tao amin’ny “Espace Hanitra” Ambohibao Antehiroka moa no toerana nanatanteranana izany ka kristiana […]
Publié parfilazantsaramada février 26, 2015 février 27, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
« Fa hianareo jentilisa no itenenako. Koa satria Apostolin’ny jentilisa aho, dia mankalaza ny fanompoako, raha mba misy hahazoako hampialona ireo mifanapa-tsinay amiko, mba hamonjeko ny sasany aminy. » (Romana 11:12-14) Ny hoe “diakona” dia avy amin’ny teny Grika hoe: Diakonia, FANOMPOANA no heviny, na asa fanompoana, ary ny apostoly Paoly no tena nanambara an’io diakonia io […]
Publié parfilazantsaramada février 20, 2015 février 13, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA!
Zava-dehibe ny fitaizana ara-panahy ny Mpianatra. Iaraha-mahalala ny fahasarotan’ny fitaizana sy fanabeazana ny tanora amin’izao fotoana izao. Na dia Sekolim-pinoana aza ny Lycée Privé Martin Luther eny Ambohimanambola dia nanamafy hatrany ny Talen-tsekoly, Rtoa Norohanta Louisette fa tena tokony ho voalohan-daharana ny fitaizana ara-panahy ny mpianatra. Ho tohin’ny fihaonany tamin’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) àry […]
Publié parfilazantsaramada février 18, 2015 février 13, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Privé Martin Luther Ambohimanambola
« Fa izay rehetra manana dia omena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » Matio 25:29 Mametraka ny fitokisany amintsika Andriamanitra ka omeny andraikitra isika. Dia, toy ny talenta eto izay omen’ny tompo ny mpanompo. Tsy ny ezaka ataontsika no ahazoantsika ny famonjena fa ny fanekentsika ny […]
Publié parfilazantsaramada février 13, 2015 février 13, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY TALENTA IZAY OMENA ANTSIKA….
Mitombo hatrany ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) Anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) nanomboka tamin’ny volana Jona 2012; amin’ny alalan’ny FSMI na « Cours Biblique par Correspondance » ny FJKM Ankadiaivo Miaramino, izay iandraiketan-dRtoa Rakotoniaina Vonimboahangy, Mpitandrina. Ny Alahady 18 Janoary 2015 lasa teo àry dia nanasa ny FF ny Fiangonana hiara-hanolotra […]
Publié parfilazantsaramada février 12, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Ankadiaivo Miaramino
« Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindram-po sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin’ny fahorianay rehetra mba hahaizany mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. » II Kor 1:3-4a -Fahoriana: Tsy ilaozam-pahoriana ny olombelona eto an-tany ary isan’izany ny aretina maro samihafa, eo koa ny fahafatesana, eo ny fahadisoam-panantenana amin’ny fitiavana, sy […]
Publié parfilazantsaramada février 6, 2015 février 4, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MILA FAMINDRAM-PO SY FAMPIONONANA VE?
Toy ny fanao isan-taona dia nihaona tao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air ireo mpiara-miasa an-tsitrapo na « Volontaire » eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina sy ireo mpiasa ao amin’ny FF, ny Sabotsy 31 Janoary 2015 maraina. Fotoana izay natao indrindra hitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2015 sy ho fifampaherezana ary ho fanamafisana ny […]
Publié parfilazantsaramada février 4, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fihaonana tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po « Volontaire » FF.